Muxuu salka ku hayaa khilaafka Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya? – Kalfadhi
Khilaafka Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa banaanka yimid kaddib markii wada-shaqeynta labada Aqal ay hoos u dhacday, isla markaana Aqalka Sare uu dhaliin xooggan u jeediyay Golaha Shacabka.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare Abshir Bukhaari, oo ka hadlayay khilaafka labada Gole, ayaa caddeeyay in khilaafkooda uusan salka ku heynin ansixinta iyo dooda Dastuurka dalka.
Labada Aqalka waxaa ay isku khilaafsanyihiin hab-raaca sharci dejinta dalka, ee cubtka 6-aad, madaxiisa 4-aad. Sidoo kale waxaa ay isku khilaafsanyihiin sida loo maareynayo sharciyada dalka, inta badan waxaan kasoo saarnay dekuminti sharciyeysan oo qodobeysan oo yaalla xafiisyad dowladda, ayuu yiri Guddoomiye Bukhaari.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa 16-kii bishan sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu jabiyay Dastuurka, markii uu todobaadkan khudbada u jeedinayay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka.